Taunggyi - The Cherry Land: ၂၀၀၆ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် ပုံရိပ်များ (၁)
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ဟာ ကျော်ကြားတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုပါ။ အစဉ်အဆက်ကျင်းပလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းလဲ ၅၀ ကျော်ပါပြီ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတော့ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ရဲ့ ထူးခြားမှုတွေ စတင်တဲ့ နှစ်ပါ။
အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ ပြည်နယ်အကြီးအကဲရဲ့ ပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့ Studio 35 ဆိုတဲ့ Media အဖွဲ့က တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီးကို၊ Live လွှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
နေ့စဉ် ည၆နာရီကနေပြီး မီးပုံးကုန်တဲ့အချိန် ၁နာရီ ၂နာရီကျော်အထိ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မီးပုံးပျံ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အကူး အပိုချိန်တွေမှာလဲ နေ့လည်ဘက် အလှမီးပုံးများ လွတ်တင်ပုံ မှတ်တမ်းတွေကို ပြန်လည် ပြသခဲ့ပါတယ်။
Camera ၄လုံးကျော်သုံးပြီး၊ အောက်ဘက် မီးပုံးပျံကွင်း၊ အပေါ် စူဋ္ဌာမုနိဘုရား၊ ခြင်းလုံးကွင်း စတဲ့ ရှုတောင့် ပေါင်းစုံကနေပြီး ရိုက်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
Transmitter ကို တောင်ပေါ် ရပ်တော်မူဘုရားအနီးမှာတင်ပြီး ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အတွက် တောင်ကြီး တစ်မြို့လုံး ဖမ်းလို့ရခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် မလည်နိုင်တဲ့ သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေခဲ့ ပါတယ်။
အရင်က အခုလိုမျိုး Live Time မှတ်တမ်းတင် ထုတ်လွင့်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခု အကြိမ်ဟာ ပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး။ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် အတွက် အပြောင်းလဲ၊ အသစ်အဆန်းပါ။ ၂၀၀၇မှာလဲ ဒီထက် ပြောင်းလဲ သစ်ဆန်းမှုတွေ တွေ့ရဦးမှာပါ။
အခုဖော်ပြမဲ့ ပုံတွေကတော့ Studio 35 မှ ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ``တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ပုံရိပ်များ´´ DVD မှ ဖြစ်ပါတယ်။ အားပါးတရ ခံစားကြည့်ကြပါ။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 12:41:00 PM
အညွှန်း: တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ, ဓါတ်ပုံများ
Accede Our Risqu‚ Prices at www.Pharmashack.com, The Unmixed [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's workshop [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Fate Mammoth Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Shopping listaKey Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] Asaarmed forces to Your Regimen ! We Expressively contemplation absent from away M‚rank look at [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !
It isn't hard at all to start making money online in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat code[/URL], It's notabig surprise if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses little-known or misunderstood avenues to produce an income online.
Monday, March 22, 2010 11:15:00 AM
top [url=http://www.001casino.com/]online casino[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]online casinos[/url] unshackled no consign reward at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]www.baywatchcasino.com
Thursday, February 07, 2013 10:25:00 PM
Friday, November 29, 2013 5:57:00 PM